HANDBALL – CCCOI 2018 :: Nahoron’ny Renioney ireo amboara roa niadiana • AoRaha
HANDBALL – CCCOI 2018 Nahoron’ny Renioney ireo amboara roa niadiana
Nanjakazaka tanteraka.Tsy afa-nanoatratamin’ny fahaizan’ireo mpilalao renioney, nandritra ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina ho an’ireo klioba tompondaka (CCCOI 2018) taranja handball, ireo solontena malagasy. Nahoron’ireo klioba renioney avokoa ireo amboara niadiana teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny sabotsy lasa teo. Tamin’ny alalan’ny isa 25 noho 17 no nivoahan’ny klioban’ny Tamponnaise ho mpandresy nanoloana ny Tana Handball Club (THBC), hany ekipa malagasy tafita teo amin’ny lalao famaranana. Nanjaka hatrany am-piandohana ireto mpilalao renioney ireto ka nisaraka tamin’ny isa 12 noho 6 ny roa tonta teo am-pialantsasatra.
Niezaka ny nanohitra ihany ny THBC, tompondakan’ny ranomasimbe Indianina intelo, saingy tsy afa-nanoatra tamin’ny fiarovan-tena tsara rindran’ireo mpilalaon’ny Tamponnaise.
“ To m b o n y h o a n a y n y haben’ny vatana. Teo ihany koa ny hamaroan’ireo lalao ataonay mandritra ny taona ka manome anay traikefa, indrindra mandritra ny fiadianany ho tompondakan’ i La Réunion”, hoy i Valérie Delord, mpanazatra ny Tamponnaise. Imbalo voahosotra ho tompondakan’i La Réunion izy ireo ary efa nahazo ny
anaram-boninahitra teo amin’ny fifaninanam-pirenena frantsay “Nationale 2” sy “Nationale 3”.
“Efa nanao izay azonay natao izahay saingy mbola tsy tena zatra ny fifaninanana avo lenta toy izao. Betsaka ireo fanafihana very momoka nataon’ireo mpilalaonay”,
hoy i Seta Ramiandrasoa, mpanazatra ny ekipan’ny Tana Handball Club (THBC). Teo amin’ny sokajy lehilahy ihany koa dia voahosotra faninefany ho tompondakan’ ny ranomasimbe Indianina ny klioban’ny Chateau Morange, avy any la Réunion. Lavon’izy ireo tamin’ny alalan’ny isa 39 noho 29 ny ekipan’ny Tsingouni avy any Mayotte,
teo amin’ny lalao famaranana.
Nikatona hatreo ny fifaninanana notanterahina teto Madagasikara, tamin’ity taona ity, ho an’ny fikambanan’ireo rafitra mifehy ny Handball aty amin’ny ranomasimbe
Indianina. Ny nosy Maorisy indray no hampiantrano izanyamin’ny taona ho avy.
TENISY AMBONY LATABATRA :: Mitaky ny trosany nankanesana tany Maorisy ireo mpilalao